Tsy masin-toetra, tsy marin-toerana… | NewsMada
Tsy masin-toetra, tsy marin-toerana…
Mody tsy mahita amin’izay adidy tokony hamakiana loha, misehoseho ho inona amin’izay hahazoana tombontsoa… Inona na ahoana koa? Mitsambikimbiki-mikimpy amin’izay tsy hita sy tsy azo antoka fa anaovana kitsapatsapa, mievotrevotra amin’izay heverina ho kely vita ho tsy manam-paharoa.
Tsy hita hotanisaina. Miara-dalana amin’izany ny tsy fanaraha-dalàna, ny teniko fe lehibe, ny fisian’ny tsimatimanota, ny lehibe tsy meloka, ny kolikoly hoe avo lenta na fomba faran’izay mirefarefa amin’ny tany aza, ny kiantranoantrano, ny tsy fangaraharana, ny amboletra, ny tsy fanajana ny teny nomena…
Inona avokoa izany? Izao iainana izao: mikatso ny raharaham-pirenena; ny fiainam-bahoaka, tsy mitsaha-mitotongana. Tsy foana ny delestazy, na telo taona aza; misy ny mizana tsindrina ila amin’ny fampiharan-dalàna: fisamborana olona, fanagadrana… Manginy fotsiny ireo raharaha tsy mazava
Ny andramena tratra tany Singapour, ohatra; ny fakana an-keriny tany Toamasina, ny baomba nipoaka teny Mamahasina ny 26 jona, ny raharaha momba an’Anjozorobe, Soamahamanina, Ambohimahamasina… Manampy ireo ny tsy fangaraharana momba ny Frankofonia: vola avy aiza, ohatrinona… ?
Amin’izany, heverin’ny mpitondra fa mandeha ny raharaham-pirenena ary hainy ny hoe politika: miporitsaka etsy sy eroa, mody tsy mahita ny fahoriam-bahoaka na miseho ho mahavita imason’ny vahiny… Tafavoaka na mivoaka toy ny mandresy hatrany na honahona aza no ilomanosana?
Toy ny hoe tsy misy mahalala ny raharaha: atao hatrany, na iza hiteny na iza tsy faly. Izay mihetsika, soketaina ho manakorontana sy manongam-panjakana: pepoina, vonoina, gadraina. Hahagaga raha tsy mety ho marin-toerana? Manao amboletra amin’izay atao rehetra? Tsy masin-toetra tsinona…
Toko tapaka, vilany mitongilana: izay tsy mety, esorina… Ahoana? Efa be izay hoe karazana fiala-nenina izay: tenenina, sarotra arenina. Bemarenina mahafa-nenina sao hanenenana.. Na izany filaza azy izany aza, efa mitady hahadomelina? Fotoana fieritreretana izao faramparany izao…